३० जना नर्सिङ छात्राले दिए सिंहदरबार अगाडि आत्मदाह गर्ने चेतावनी (प्रेस विज्ञप्तिसहित) - samayapost.com
३० जना नर्सिङ छात्राले दिए सिंहदरबार अगाडि आत्मदाह गर्ने चेतावनी (प्रेस विज्ञप्तिसहित)
समयपोष्ट २०७६ पुष २२ गते १७:१६
अदालतको आदेशले आफू अध्ययनरत कलेज नै खारेजीमा परेपछि ३० जना नर्सिङका विद्यार्थीहरुले आत्मदाहको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले आफूहरुको भविष्य अन्धकारमा पारिएको भन्दै सिंहदरबार अगाडि आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडित विद्यार्थी संघर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गर्दै आत्मदाह सम्म गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । हामीमाथि अन्याय हुँदा पनि सुनुवाई हुँदैन भने आत्मदाह गर्न वाध्य हुनेछौं, पीडित विद्यार्थी संघर्ष समितिकी संयोजक अनुष्का चौलागाईंले भनिन् । र्दुगम गाउँबाट नर्स बन्ने सपना बोकेर आएका ३० जना ठिमीस्थित चक्रवती हबी एजुकेशन एकेडेमी कलेज अफ नर्सिङ साइन्स कलेजमा भर्ना भएकामा अदालतको आदेशले खारेजीमा परेपछि परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका थिए । उनीहरुले सीटीइभीटी देखि शिक्षा मन्त्रालयसम्म धाउँदा पनि परीक्षा दिन नपाएपछि दुई वर्ष नर्सिङ अध्ययन खेर गएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा छात्रा अनुष्का चौलागाईँले कलेजको गल्तीको सजाय आफूहरुले पाउन नहुने बताइन् । सरकारले आफूहरुलाई न्याय नदिए कडा कदम चाल्न वाध्य हुने उनको भनाई थियो ।
हामी पढ्दै गयौं । परीक्षा पनि आयो । तर, पहिलो वर्षको परीक्षाबाट वञ्चित भयौं । बुझ्दै जाँदा एक वर्ष अगाडि नै कलेज मापदण्ड नपुगेर खारेज भएको रहेछ । अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएर विद्यार्थी भर्ना गरेको रहेछ । त्यो सुन्दा छाँगाबाट खसेजस्तै भयौं । हामीलाई जीवनमै सबैभन्दा ठूलो पीडा अनुभूती भयो । कलेजले हामीलाई धोका दिएको रहेछ । सीटीइभीटी पुग्यौं, प्रशासन देखि जिम्मेवार निकायमा पुग्यौं । अदालतको फैसला कुर्न भनियो । हामी गाउँबाट आएका चेलीहरुले अदालत भनेको देखेका पनि थिएनौं । अदालती प्रक्रियाबाट थाहा हुने कुरै थिएन । जीवनमा कहिले नभोगिएको पीडा र धक्का कलिलो किशोरावस्थामा भोग्नुप¥यो । आखिर हामीले के गल्ती गरेका थियौं ? हाम्रो के अपराध थियो ? विकट गाउँबाट आएर काठमाडौं पढ्न आउनु हाम्रो अपराध थियो ? यति थियो भने हामीलाई कारबाही गरियोस् तर, अध्ययनको अधिकारबाट वञ्चित नपारियोस् । हामीले सुनेका छौं कि जेलमा बसेका कैदीबन्दीले पनि पढ्न लेख्न पाउँछन् । परिक्षा दिन पाउँछन् । तर, हामी कुनै अपराध नगरेका निर्दोष चेलीहरुको जीवन बर्बाद गर्न खोजियो । हाम्रो के दोष थियो ।